sunday ညအတွက် ပွဲကြို + P’Cs | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » sunday ညအတွက် ပွဲကြို + P’Cs
sunday ညအတွက် ပွဲကြို + P’Cs
Posted by မောင် ပေ on Jan 13, 2013 in Creative Writing, Hobbies & Games |5comments
P’Cs ဆိုတာ ပေ့ စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်
13/1/2013 တနင်းဂနွေညမှာ ဘောလုံးဝါသနာရှင်များ စိတ်ကြိုက်တွေ့ မယ့် ရှယ်ပွဲတွေကန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ်က အဆင့်၁ မန်ယူ နဲ့အဆင့်၈ လီဗာပူး တို့ တွေ့ ကြမှာ ဖြစ်သလို
အဆင့်၆ အာကြီး နဲ့အဆင့်၂ မန်စီးတီး တို့ ရဲ့ တွေ့ ဆုံမှုကလဲ တစ်ကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပါ ။ အီတလီ စီးရီးအေမှာလဲ နာပိုလီ နဲ့ ပါလာမို တို့ တွေ့ ဆုံမှုဟာ ပရိသတ်တော်တော်များများအားပေးတဲ့ နာပိုလီ လွယ်လွယ်နဲ့ အနိုင်ရဖို့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး
ထို့ အတူ သည်နှစ်ရာသီတော့ ဘာစီလိုနာပဲ ချန်ပီယံဖြစ်မှာပါလို့တပ်အပ်ပြောနေတဲ့ အဆင့်၁ ဘာစီလိုနာ နဲ့အဆင့်၎ မာလာဂါ တို့ တွေ့ ဆုံမှုဟာ မာလာဂါအိမ်ကွင်းမှာ ကန်ကြမှာ ဖြစ်လို့ ၊ ဘာစီလိုနာ မလွယ်ပါဘူး
ဒီည ပွဲတွေနဲ့ အချိန်တွေကတော့
*** ပရီးမီးယားလိဂ် ***
8.00 မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်(၁) – လီဗာပူး(၈)
10.30 အာဆင်နယ်(၆) – မန်ချက်စတာစီးတီး(၂)
*** စီးရီးအေ ***
6.00 တိုရီနို(၁၃) – ဆီနာ(၂၀)
8.30 ကယ်ဂလီယာရီ(၁၈) – ဂျီနိုအာ(၁၇)
8.30 ကာတားနီးယား(၁၀) – ရိုးမား(၆)
8.30 လာဇီယို(၂) – အက်တလန်တာ(၂၀)
8.30 နာပိုလီ(၃) – ပါလာမို(၁၉)
8.30 ပါးမား(၈) – ဂျူဗင်တပ်(၁)
8.30 အူဒီးနီး(၉) – ဖီအိုရင်တီးနား(၄)
2.15 ဆမ်ဒိုးရီးယား(၁၄) – အေစီမီလန်(၇)
*** လာလီဂါ ***
5.30 ရီးရဲဘက်တစ်(၅) – လီဗန်တေ(၈)
10.30 ရီးရဲဆိုစီဒက်(၉) – ဒီပို့ တီဗို(၂၀)
12.30 အသလက်တီကို(၂) – ဇာရာဂိုဇာ(၁၃)
2.30 မာလာဂါ(၄) – ဘာစီလိုနာ(၁)
“ရပ်ကွက်ထဲက ဘောလုံးသမားတွေကို သွားမေးကြည့်ရင် မန်ချက် လို့ ပဲပြောကြလိမ့်မယ် ၊ But”
မန်ယူ (၁) – လီဗာပူး (၈)
မန်ယူ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၂၁အပြီး ၁၇ နိုင် ၊ ၁ သရေ ၊ ၃ ရှုံး ၊ ရဂိုး ၅၄ ပေးဂိုး ၂၈ ၅၂ မှတ်
လီဗာပူး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၂၁အပြီး ၈ နိုင် ၊ ၇ သရေ ၊ ၆ ရှုံး ၊ ရဂိုး ၃၄ ပေးဂိုး ၂၆ ၃၁ မှတ်
မန်ယူ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
ဝက်ဟမ်း ၂-၂ မန်ယူ (အက်ဖ်အေ)
ဝီဂန် ၀-၄ မန်ယူ
မန်ယူ ၂-၀ ဝက်ဘရွန်း
မန်ယူ ၄-၃ နယူးကာဆယ်
ဆွမ်ဆီး ၁-၁ မန်ယူ
လီဗာပူး အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
မန်စဖီးတောင်း ၁-၂ လီဗာပူး (အက်ဖ်အေ)
လီဗာပူး ၃-၀ ဆန်းဒါးလန်း
ကျူပီအာ ၀-၃ လီဗာပူး
စတုတ် ၃-၁ လီဗာပူး
လီဗာပူး ၄-၀ ဖူဟမ်
မန်ယူ ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Rafael, Evans, Vidic, Evra
လယ် Valencia, Carrick, Scholes, Giggs
ရှေ့Van Persie, Chicharito
နောက် Johnson, Skrtel, Agger, Downing
လယ် Gerrard, Lucas, Allen
ရှေ့Sturridge, Suarez, Sterling
မန်ယူမှာ ရွန်းနီး ၊ ဖီးလ်ဂျုန်း နဲ့နာနီ တို့ ဟာ ဒဏ်ရာရနေပါတယ် ။ ရွန်းနီ နဲ့ ဖီးဂျုန်း တို့ ဟာ လေ့ကျင့်ကွင်းမှာ ပြန်ဆင်းနေပေမယ့် ၊ ပါဝင်ကစားဖို့ မသေချာပါဘူး
လီဗာပူးမှာတော့ အန်းနရစ် ၊ ကယ်လီ နဲ့ဘိုရီနီ တို့ ဒဏ်ရာရနေပါတယ်
မန်ယူ ရဲ့ ဗန်ပါစီ ဟာ သွင်းဂိုး၁၆ ဂိုး နဲ့ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်နေပြီး ၊ လီဗာပူး ရဲ့ ဆွာရက် ကတော့ သွင်းဂိုး၁၅ဂိုး နဲ့ဒုတိယ လိုက်နေပါတယ်
မန်ယူ သည်ရာသီ အိမ်ကွင်း ၁၀ပွဲကန်ခဲ့ရာမှာ ၉ ပွဲ နိုင်ပြီး ၁ ပွဲ ရှုံးထားပါတယ်
လီဗာပူး သည်ရာသီ အဝေးကွင်း ၁၀ပွဲကန်ခဲ့ရာမှာ ၃ နိုင် ၄ သရေ ၃ ရှုံး ပါ
ဗန်ပါစီ ဟာ လီဗာပူးနဲ့ ဆုံခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး၆ပွဲမှာ ၅ ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်
လီဗာပူး ကပ်ပတိန် ဂျရတ် ဟာ သည်နှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ ဖန်တီးနိုင်မှု အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီး ၈ကြိမ်တိတိ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
မန်ယူအိမ်ကွင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့သုံးကြိမ်တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများကတော့
11.2.2012 မန်ယူ ၂-၁ လီဗာပူး
19.9.2010 မန်ယူ ၃-၂ လီဗာပူး
21.3.2010 မန်ယူ ၂-၁ လီဗာပူး
သည်နှစ်သင်းနောက်ဆုံးတွေ့ ခဲ့တဲ့ ၅ပွဲမှာ ၁-၁ သရေကျတာ တစ်ပွဲပဲ ရှိပြီး ကျန်၎ပွဲကတော့ ၂သင်းလုံးသွင်းဂိုး ၃ ဂိုး နဲ့၃ဂိုးအထက်တွေပါပဲ
ဈေးအနေအထားအရ မန်ယူ သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးအနေအထားကို မန်ယူ သရေမှ ၉၀အရှုံးပတ်ချာလည်ပဲ ဖွင့်လာပါတယ်
မန်ယူအိမ်ကွင်းမှာ ကန်ကြမှာ ၊ သမိုင်းအစဉ်အလာအရလဲ မန်ယူအနဲဆုံးတော့ တစ်ဂိုးအသာနဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာရှိတယ် ။ ဒါကိုတောင် ဈေးက တစ်ဂိုးသွင်းရင် ဘယ်လောက်စား မဖြစ်ပဲ ၊ သရေကန်ရင်တောင် အပြည့်မရှုံးဘူးဆိုတော့ ၊ မန်ယူ ကို ခေါ်ထားတာ သိသာလွန်းအားကြီးပါတယ် ။
မောင်ပေ ကတော့ “““ လီဗာပူး ””” နဲ့ အတူတူ ရှိနေပါမယ်
အာဆင်နယ် (၆) – မန်စီးတီး (၂)
အာဆင်နယ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၂၀အပြီး ၉ နိုင် ၊ ၇ သရေ ၊ ၄ ရှုံး ၊ ရဂိုး၄၀ ပေးဂိုး၂၂ ၃၄ မှတ်
မန်စီးတီး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်၂၁အပြီး ၁၃ နိုင် ၊ ၆ သရေ ၊ ၂ ရှုံး ၊ ရဂိုး၄၁ ပေးဂိုး၁၉ ၄၅ မှတ်
အာဆင်နယ် အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
ဆွမ်ဆီး ၂-၂ အာဆင်နယ် (အက်ဖ်အေ)
ဆောက်သင်ပတန် ၁-၁ အာဆင်နယ်
အာဆင်နယ် ၇-၃ နယူးကာဆယ်
ဝီဂန် ၀-၁ အာဆင်နယ်
ရီဒင်း ၂-၅ အာဆင်နယ်
မန်စီးတီး အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
မန်စီးတီး ၃-၀ ဝက်ဖို့(အက်ဖ်အေ)
မန်စီးတီး ၃-၀ စတုတ်
နော့ဝစ် ၃-၄ မန်စီးတီး
ဆန်းဒါးလန်း ၁-၀ မန်စီးတီး
မန်စီးတီး ၁-၀ ရီဒင်း
နောက် Sagna, Mertesacker, Vermaelen, Gibbs
လယ် Arteta, Wilshere
လယ် Oxlade-Chamberlain, Cazorla, Podolski
ရှေ့Walcott
မန်စီးတီး ရဲ့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ကစားသမားများမှာ
နောက် Zabaleta, Nastasic, Kompany, Clichy
လယ် Garcia, Barry
လယ် Silva, Tevez, Milner
ရှေ့Dzeko
အာဆင်နယ်မှာ ဖေဘီးယန်းစကီး နဲ့ အိုလီဗာ ဂီရော့ တို့ ဒဏ်ရာရနေပါတယ်
မန်စီးတီး မှာ တိုရေးညီအစ်ကို အာဖရိဖလားပွဲသွားနေလို့ မပါ ပါဘူး ။ အဂူရို ၊ ကိုလာရော့ ၊ မိုက်ကွန်း ၊ မီကာရစ်ချက် နဲ့ ရော့ဝဲ တို့ ဟာ ဒဏ်ရာရနေပြီး ၊ နာဆရီ ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နော့ဝစ်နဲ့ ပွဲတုန်းက အနီကဒ်ကြောင့် သည်ပွဲလွဲပါမယ်
အာဆင်နယ်တိုက်စစ်မှူး ဝေါလ်ကော့ ဟာ သည်နှစ်ပွဲပေါင်းစုံကန်ခဲ့ရာမှာ ၁၅ ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး၊ ဂိုးရဖို့၆ကြိမ်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
အာဆင်နယ် အိမ်ကွင်းမှာ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုများကတော့
22.7.2012 အာဆင်နယ် ၀-၂ မန်စီးတီး (ခြေစမ်းပွဲ)
8.4.2012 အာဆင်နယ် ၁-၀ မန်စီးတီး
29.11.2011 အာဆင်နယ် ၀-၁ မန်စီးတီး (ကာလင်းဖလား)
ဈေးအနေအထားအရ ဒဲ့အနေအထားကို အာဆင်နယ် သရေကို ပါးပါးလေးအရှုံးဖွင့်လာပါတယ်
ဂိုးဈေးကတော့ သုံးဂိုးသွင်းရင် ၅၀ အနိုင်အနေအထားကို ၅၀အထက်ဖွင့်လာပါတယ်
“““ အာဆင်နယ် ””” + “““ ဂိုးအနဲ ”””
၈နာရီခွဲပွဲတွေထဲက အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်သေချာပေါက် ပြန်ရှာမယ့် ““ကယ်ဂလီယာရီ””
ကယ်ဂလီယာရီ (၁၈) – ဂျီနိုအာ (၁၇)
ကယ်ဂလီယာရီ စီးရီးအေပွဲစဉ်၁၉အပြီး ၄ နိုင် ၊ ၄ သရေ ၊ ၁၁ ရှုံး ၊ ရဂိုး၁၇ ပေးဂိုး၃၅ ၁၆မှတ်
ဂျီနိုအာ စီးရီးအေပွဲစဉ်၁၉အပြီး ၄ နိုင် ၊ ၅ သရေ ၊ ၁၀ ရှုံး ၊ ရဂိုး၂၀ ပေးဂိုး၃၀ ၁၇မှတ်
ကယ်ဂလီယာရီ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
လာဇီယို ၂-၁ ကယ်ဂလီယာရီ
ကယ်ဂလီယာရီ ၁-၃ ဂျူဗင်တပ်
ပါးမား ၄-၁ ကယ်ဂလီယာရီ
ဂျူဗင်တပ် ၁-၀ ကယ်ဂလီယာရီ (ကိုပါအီတာလီယာ)
ကယ်ဂလီယာရီ ၀-၂ ချီယေဗို
ဂျီနိုအာ အခုပွဲမကန်ခင် ကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေကတော့
ဂျီနိုအာ ၂-၀ ဘိုလော့နာ
အင်တာမီလန် ၁-၁ ဂျီနိုအာ
ဂျီနိုအာ ၁-၁ တိုရီနို
ပက်စကာရာ ၂-၀ ဂျီနိုအာ
ဂျီနိုအာ ၂-၄ ချီယေဗို
ကယ်ဂလီယာရီ အိမ်ကွင်း ဂျီနိုအာနဲ့ တွေ့ ဆုံခဲ့မှုတွေကတော့
8.1.2012 ကယ်ဂလီယာရီ ၃-၀ ဂျီနိုအာ
14.11.2010 ကယ်ဂလီယာရီ ၀-၁ ဂျီနိုအာ
ဈေးအနေအထားအရ ကယ်ဂလီယာရီ သရေဆိုရင် အပြည့်ရှုံးကို ကယ်ဂလီယာရီ တစ်ဂိုးသွင်းမှ ၉၀ပတ်ချာလည် အနိုင်ပဲပေးလာပါတယ်
“““ ကယ်ဂလီယာရီ ””” ရဲ့ အနိုင်ဟာ တစ်ဂိုးအသာလား ၊ ဒါမှမဟုတ် ဂိုးပြတ်မှာလား ၊ အေးဆေးထိုင်ကြည့်ရုံပါပဲ
******* အားလုံး အောင်မြင် ရွှင်လန်း နိုင်ပါစေ *******
စောင့်နေမယ်ဗျိူး…ဘာမှ့မလုပ်သေးပဲ…ဒီညတော့ အိတ်နဲ့လွယ်ကြစို့ ကိုပေရေ..
အားကိုးပါတယ် ဦးပေရယ်…စနေညက အခြေမလှဘူးဗျို့။။။။
ဘူဒွေ ဘာကြောကြော …
ကြိုးကြာနီ နဲ့ မန်စီးတီး ဘက်ကပဲ ….
ဒီညတော့ ညဉ့်နက်ပြီပေါ့ ….
ဆိုတော့က အာဆင်နယ် နဲ့ ထပ်ယူရမယ်
ဘာစီလိုနာကတော့ အလွန်ဆုံးနိုင် တစ်ဂိုး
အေစီ က တော့ နေရဲရင် ရမယ်